Eziokwu Ndị Dị mwute nke Obi |tọ | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 26, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Ekwere m na m na-elekọta obi ụtọ m. Enwere ọtụtụ mmetụta dị na mpụga (ego, ọrụ, ezinụlọ, Chukwu, wdg) mana na njedebe, ọ bụ m na-ekpebi ma m nwere obi ụtọ.
N'ụtụtụ a, elere m akụkọ ahụ na Madonna na-ete ya na Oprah na-akọwa nwa ya si Africa. Ihe kacha masị m bụ nkwupụta ọtụtụ mmadụ kwuru na nke a bụ nnukwu ihe Madonna mere nke ga-ewetara nwata ahụ obi a happinessụrị.
Enweela m ụta banyere nke a na saịtị m, mana nke a bụ naanị ihe nzuzu. Kedu ihe kpatara ọha mmadụ ji ejikọ ọgụgụ isi, ikike, na obi ụtọ mgbe niile na akụ na ụba? Ya mere Madonna ga - eme nne ka mma n’ihi na ọ bara ọgaranya? Ikekwe ogige ụmụ mgbei nke nwata nwoke ahụ nọ nwere ndị ezigbo mmadụ hụrụ ya n'anya ma lekọta ya. O doro anya, mana enwere m obi ike na ọ ga-enwe onye nlekọta n'okpuru Madonna. Yabụ, kedu ihe dị iche?
Ego ga-eme nwata a obi anuri? O doro gị anya? Hụtụla ụfọdụ ndụ ụmụaka nke kpakpando ma ọ bụ ndị bara ọgaranya? Ọtụtụ n'ime ha nọ na nke mgbatị na mgba ndụ ha niile iji meere onwe ha aha. Akụ na ụba na - eweta nsogbu ọhụrụ ọhụụ na ndụ (nsogbu ọ ga - amasị m ịnwe, n'agbanyeghị). Nakwa, ị ga-achọ Madonna dị ka mama m? Agaghị m! Achọghị m ịma ego ole o nwere… Ahụla m nke ukwuu Madonna na ndụ m ịkwanyere ya ùgwù.
Naanị ma eleghị anya nke a bụ ihe gbasara obi ụtọ Madonna karịa nke nwa ahụ. Ọ bụ ihe nwute, mana m na-eche na nke a bụ ikpe. Enweghị m ike ikwenye na nwatakịrị ewepụrụ site na ọdịbendị ya, ala nna ya, ezinụlọ ya nwere ohere na obi ụtọ na ịtọ ntọala Rock Star dị ka mama m.
Nwatakịrị ahụ nọ n'ogige ụmụ mgbei n'ihi na nna ya enweghịzi ike ilekọta ya. Anyị enweghị ike ịme echiche banyere ọdịbendị ndị ọzọ na omume nne na nna ha. Ọtụtụ ndị America ga-eju anya na ọdịbendị ụfọdụ na otu esi elekọta ụmụaka ma ọ bụ mesoo ha. Ikekwe nwoke ahụ hụrụ nwa ya n'anya nke ukwuu nke na o nyefere nwa ya n'aka onye nwere ike inye ya nri. Nke ahụ ga-ewe oke ịhụnanya.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na, karịa ịzụ ahịa maka nwatakịrị, Madonna guzobere ụfọdụ ntinye ego ogologo oge nke mere ka agụmakwụkwọ, akụ na ụba na ụlọ ọrụ dị mma maka mpaghara ọ gara? O nwere ike ịbụ na o meela ka obi tọọ ọtụtụ ndị ụtọ. Ikekwe nwa ahụ ọ kpọtara gaara enweworị obi ụtọ n'ụzọ ahụ.
Ọkt 27, 2006 na 6:29 AM
Chineke n’eme ka ihe nile lua oru n’otu nye ndi hụrụ Chineke n’anya, ndi akpọrọ na nzube ya… nwee okwukwe!
Ọkt 30, 2006 na 6:15 AM
Lelee http://gather.com/ - Ngalaba ịkparịta ụka n'socialntanet nke NPR na-eme ntuli aka taa: "you chere na ndị mgbasa ozi mesoro Madonna ihe na-ezighi ezi na mbọ mbọ nnabata ya?"